ဒေတာစုဘူး + JOOX + VIU | Telenor Myanmar
အင်တာနက်ဒေတာလည်း သုံးချင်တယ်… သီချင်း နားထောင်ရတာနဲ့ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရတာကိုလည်း ခုံမင်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ “ဒေတာစုဘူး” ပတ်ခ်လေးက သင် လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
Data Suboo 1GB + JOOX VIP + VIU Premium
အထက်ပါ အစီအစဉ်ကို MyTelenor နှင့် WowBox အက်ပလီကေးရှင်းများမှာလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
“ဒေတာစုဘူး” ပတ်ခ်အား ရယူပြီး
ယင်း “ဒေတာစုဘူး”ပတ်ခ်ကို ရယူပြီး VIU ပရီမီယမ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဒေတာစုဘူးအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင် ‘ဒီမှာ’ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီပတ်ခ်က အခြား ဒေတာစုဘူးပတ်ခ်တွေနဲ့ ဘာကွာလဲ?
အင်တာနက်ဒေတာလည်း သုံးချင်တယ်… သီချင်းနားထောင်ရတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုလည်း ခုံမင်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ “ဒေတာစုဘူး” ပတ်ခ်လေးက သင် လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ဒီဒေတာစုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူထားရင် ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေ ရရှိမလဲ?
ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိပါတယ်။ သုံးမကုန်တဲ့ဒေတာများကို နောက်တကြိမ်ဒေတာစုဘူးလျှင်ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ပါမည်။ ဒေတာလက်ကျန်စစ်ရန် *9124#
ဒီဒေတာစုဘူးကို အခြားဒေတာစုဘူးတွေနဲ့ တွဲဖက်ခံစားလို့ရလား?
ဒေတာစုဘူးပတ်ခ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ၀ယ်ယူတဲ့ အင်တာနက်ဒေတာတွေဟာ မိမိရဲ့ စုစုပေါင်းဒေတာအဖြစ် ပေါင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တွဲဖက်ခံစားလို့ရပါတယ်။ ဒေတာစုဘူးအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင် ‘ဒီမှာ’၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီဒေတာစုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူထားရင် JOOX ရဲ့ ဘယ်လိုခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာလဲ?
ဒီဒေတာစုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူပြီး JOOX VIP ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဒီဒေတာစုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူထားရင် VIU ရဲ့ ဘယ်လိုခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာလဲ?
ဒီဒေတာစုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူပြီး VIU ပရီမီယမ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?